Ny Tendrombohitra Magic Kingdom
Etazonia Florida Walt Disney World
Ny Tanin'ny Fanjakana Magic
Main Street, Etazonia
Ny fahazazan'i Walt Disney tamin'ny Marceline, Mo., dia nanentana ny fananganana indray ny fananganana lalam-barotra mahatsiravina tany Amerika tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, feno kalia sy soavaly vita amin'ny soavaly ary tranombarotra barbariana.
Ny làlana main Street, Etazonia dia ahitana ny:
Ny Walt Disney World Railroad, vondron-drivotra vendrana iray izay manome fisehoana malaza manerana ny valan-javaboary amin'ny fijanonana ao Frontierland sy ny Toontown Fair Mickey.
Ny horonan-tsarimihetsika fanadihadiana "True-Life Adventure" nataon'i Disney dia nanome ny fofom-bozaka ho an'ny ala honko sy bibidia.
Toetran'ny Adventureland dia ahitana:
Pirates de la Caraïbe , fiaramanidina goavam-be iray misesisesy ankehitriny izay manasongadina ny kapiteny Jack Sparrow sy ireo karazana sariitatra hafa avy ao amin'ny sarimihetsika "Pirates of the Caribbean".
Jungle Cruise , manala baraka ny renirano malaza indrindra eran-tany.
Ny sarin'ny Magic of Aladdin, spin avo-flying amin'ny karipetra mahagaga.
Ny tranom-patin'i Tché Tchiki - eo ambany fitantanana vaovao, izay mametraka am-pihetseham-pihetseham-pihetseham-po amin'ny lozam-piaramanidina voalohany nataon'i Disney mba hanehoana ny tantara telo-dimby an'ny Audio-Animatronics.
Ny tantaran'ireo Tandrefana Tandrefana dia niaina tao anatin'ity toeram-ponenan'ny prairie ity izay nivezivezin'ny mpanarato sy ny mpitrandraka.
Sehatr'i Frontierland dia ahitana:
Splash Mountain , zip-a-da-doo-dah log mandeha amin'ny fikarohana ny "toerana mihomehy" an'i Br'er.
Big Thunder Mountain Railroad, fiara fitaterana an-dalamby mitaingina môtô mirehitra sy vato matevina. Fastpass, fameperana ambony amin'ny 40 ".
Firenena Bear Jamboree, horonam-peo mihomehy mihira.
Miverena any amin'ny taonan'ny Amerikana mpanjanaka any amin'ity tany ity izay manome voninahitra ny lova navelan'ny firenena.
Ny mahasamihafa ny Liberty Square dia ahitana:
Ny Haunted Mansion , toeram-ponenana goavam-be iray izay ahitana fraternite fraternité avy amin'ny fianakaviana avy amin'ny 999 fifaliana sambatra.
Hall of Presidents, fifampiarahabana Audio-Animatronics miarahaba ny lehiben'ny United States sy ireo tolona izay nanorina an'i Amerika.
Liberty Belle Riverboat dia mamakivaky ny reniranon'i Amerika any amin'ny Frontierland.
Nalaina avy amin'ny iray amin'ireo tany tany am-piandohan'i Disneyland i Fantasyland, izay maniry ny ho sambatra indrindra ao amin'izy rehetra. Ireo tantaram-pifaliana dia mamoha amin'ny pejin'ny rakitsary ao amin'ity tany feno lozam-piaramanidina, printsy, ary elefantsa manidina.
"PhilharMagic an'ny Mickey", "sym-funny" 3-D "mozika Disney sy ireo karazan-tsarimihetsika fampisehoana. Natao ho an'ny sokajin-taona rehetra.
Ny Fihetseham-po maro nataon'i Winnie the Pooh, izay mandefa vahiny amin'ny diany mangatsiaka amin'ny alalan'ny Hundred Acre Wood.
"Tontolo madinika ity", dia ny lalao mozika iray efa nandalo saribakoly ho an'ny firenena rehetra.
Ny sidina Peter Pan, sidina miloko mipoitra avy any Londres mankany Neverland.
Ny Carrousel Golden Cinderella, be mpakafy tsara be sy be dia be.
Dumbo the Flying Elephant, mpitaingina kiddie malaza roa.
Antoko Fihomehezana Mad, miontana sy teboka manerana ny sehatra ho an'ny antoko tsy mendrika ny fankalazana ny Mad Hatter.
Ireo Fihetseham-panoheran'i Snow White, nalaina tao amin'ny sarimihetsika mavitrika voalohany, dia nitantara ny fihaonan'i Snow White tamin'ny ratsy fanahy.
Fihetseham-piainana ary fifandraisana mivantana amin'ny karazan'olona ao Fantasyland:
Pooh's Playful Spot, sehatra fialamboly mifototra amin'ny The Hundred Acre Wood
A Grotto Ariel, mozika manintona mivoaka ivelan'ny mozika mpiangona ao amin'ny Golden Carrousel an'i Cinderella dia ahafahana manasa ny vahiny hihaona ilay sipakely mamy "The Little Mermaid" mandritra ny andro.
Fairytale Garden, Belle avy amin'ny "Beauty and the Beast" dia mitsahatra amin'ny famakiana tantara ary mifangaro amin'ny vahiny imbetsaka isan'andro.
Taorian'ilay Antoko Mad Tea, ireo karazana avy amin'ny "Alice in Wonderland" dia miarahaba ireo vahiny indraindray isa-maraina manakaiky ny fanintelony.
Ny Fair Toontown Mickey
Andeha hojerena hoe aiza no misy an'i Micky, Minnie, ary ny andian-jiolahy eto amin'ity firenena ity.
Ny toetran'i Mickey's Toontown dia ahitana:
Ny Barnstormer, toeram-pivoahana an-kalamanjana iray izay manintona amin'ny alàlan'ny Farihin'i Wiseacre Goofy.
Fihetseham-piainana sy fifandraisana mivantana amin'ny karazan'entana ao amin'ny Fair's Toontown Mickey:
Ny Country House Mickey, fitsidihana an-dalamby mankany amin'ny trano malaza, izay ahafahan'ny vahiny manana fahafahana hitsena an'i Micky manokana.
Toontown Hall of Fame, ny karazam-pitiavan'i Disney dia maka toerana lehibe ao amin'ny Toontown Hall of Fame, izay ahitan'ny vahiny misimisy ihany amin'ny fidirana an-tsarimihetsika goavam-be Toontown Fair.
Ny boatin-tsambon'i Donald Duck, Miss Daisy, jiro mavo sy mena dia manamboatra sombin-koditra marevaka, sehatra fanasan-damba ary ranomasimbe matevina manasongadina lelavola izay mamoaka rano mitsambikina ary mitsambikina tsy misy fampitandremana.
Toon Park, ity kianja maitso maitso, maizim-bary sy fararano ity dia toerana ho an'ny ankizy hianika sy hijery ireo toeram-pitsangatsanganana. Misy ihany koa ny faritra marokoroko izay ahafahan'ny ankizy miditra sy manakaiky ny vatam-borona goavam-be ary ny trano mavo sy mavo.
Mandrosoa mankany amin'ny hoavy eto amin'ity sambo nônôma ity sy ny vahiny.
Ny lehibe indrindra any Tomorrowland dia ahitana:
Ny fandosiran'i Stitch Great! fihaonana akaiky amin'ny vahiny tsy fanta-daza amin'ny "Lilo & Stitch."
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, fifandonana manohitra ny Evil Emperor Zurg.
Space Mountain, fiara fitaterana haingam-pandeha haingam-pandeha amin'ny alalan'ny cosmos.
Astro Orbiter, fiaramanidina fiara-milina ary mitaingina haingam-pandeha amin'ny alalan'ny planeta mihodina.
Ny karouselan'ny Fandrosoana an'i Walt Disney dia misokatra amin'ny dingana ara-potoana. Ity fampisehoana an-kira amin'ny fampisehoana mozika ity dia niandoha voalohany tamin'ny Mondialy tamin'ny taona 1964.
Fandraharahan'ny Transit Tomorrowland
Fetiben'ny Disney an'ny Masters
4 Zavatra Ataonao ao amin'ny Disney World amin'ny Anaranao
Disney World's 10 Best Snacks and Desserts
Inona no tokony hatao raha toa ka very ny zanakao amin'ny Disney World
Instagram Tour an'ny Disney's Polynesian Village Resort
Inona no tokony ho fantatra momba ny fitsidihana Disney World amin'ny volana Aprily
Kalap: Fialofana any ambanivohitr'i Himalayan any Uttarakhand
Feno Herinandron'ny Paska tany Polonina
Aoka ho mpitsidika Smart Lake Tahoe
Alefaso eny amin'ny Las Vegas Roller Coasters
Torolalana ho an'ny Fanatanjahantena ho an'ny tetikasa fandrosoana
FAO Schwarz Information
Afaka maka biby fiompy amin'ny sambo iray ve aho?
Macy ny 4 Jolay Fetiben'ny asa any New York
The 9 Best Sacramento Hotels of 2018
Vamanos! Meksika mandray ny Water Park voalohany hotely
Torolalana ho an'ny Zoo Houston
Toro-hevitra momba ny fahafantaran'ny tabilao fametrahana amin'ny tranokala sinoa iray
Toeram-pisakafoanana any Hillcrest sy ny Heights
© 2021 mg.traasgpu.com